Okufanele ukwazi mayelana simiso umkhiqizo kophawu fur? Kusukela ngo-August 2016 ke eyayiholwa project umshayeli ukuqala imikhiqizo kophawu endaweni emazweni amaningana. Ngaphansi komthetho omusha, bonke uboya kusuka ohlwini kuchazwe ukufakwa kuzo chip ekhethekile (CIC), okuyinto likhona ebhukwini futhi kuyinto idokhumenti ngogesi nokuziphendulela esiqinile.
Umkhiqizi isebenza wokugubha umkhiqizo noboya ngamunye, njengoba kufakazelwa ukuba khona chip ekhethekile ngomkhiqizo ngamunye. Eminye imininingwane mayelana nalokhu inikezwa electronic 'lesiveta' umnikazi uhlelo kanye kulomtimba lolawulako okuyinto bentela endaweni sokubhalisa umenzi. Okwamanje, umkhiqizo uhlelo kophawu noboya yethulwa kuleli umthetho futhi saphela project umshayeli.
Yini imikhiqizo zingaphansi kophawu
Yonke imikhiqizo eyenziwe kusukela izikhumba isilwane, angaphansi kophawu. Lokhu kuhlanganisa kokubili izikhumba ngabanye, kanye izingubo ezenziwe wabo iyonke noma izakhi ulwelwesi kanye collar. Hhayi kuncike akubiza izikhumba ingelashwa, kanye esetshenziswa womshini izigqoko, izicathulo, amagilavu, izingubo noma njengoba umhlobiso. Akudingi igawula izingubo ezifudumele eyenziwe studio of material yekhasimende.
A uhlu oluphelele imikhiqizo kumele alebuliwe, ezisohlwini esenezelwe oda futhi imithetho kophawu imikhiqizo noboya.
Ukumakwa kwenziwa ukuze agweme ukukufaka emakethe yekhwalithi ephansi futhi mbumbulu imikhiqizo. Chips futhi kudingeka ukulawula iziphathimandla zentela namarisidi inkokhelo kusukela abakhiqizi kanye nabathengisi imikhiqizo noboya.
Ubani okufanele lukhiqize kophawu
Ngakho, kukhona uhlelo yokuhlukanisa imikhiqizo eyenziwe uboya zemvelo. Isibopho nokusebenza kwayo ngowamagunya abakhiqizi. Wholesalers futhi abathengisi kumele athenge imikhiqizo ilebula ungenzanga. imikhiqizo Ayinalebula akufanele akhangiswe ngayo, futhi ukwehluleka ukuhambisana nalezi zimfuneko kungase nomphumela omubi umdayisi.
Unswinyo isetshenziswa ngomoni, ziyahlukahluka kuye ngobukhulu kwezimpahla ithengiswe ukumakwa. Ukuze thuthuva encane usomabhizinisi ungathola elicolekileyo, bephethe ezinkulu - up ukuboshwa unecala nge ukuhoxiswa egcwele izimpahla ukumakwa.
Kuyini chip control
Isithombe uphawu oluyinkomba, inqubo ukuze kusebenziswe futhi ukugibela umkhiqizo kungabonwa website esemthethweni ehhovisi lentela. Isibonakaliso iyona yendwangu, iphepha noma plastic chip, lapho ikhodi ekhethekile zezinombolo. Kuyinto ukumelana izinga lokushisa esiphezulu hhayi ngaphansana -40 degrees. Godu hlola uphawu has RFID-tag. Lena ikhodi digital noma chip umkhiqizo.
Le maki olufundwa idivayisi ekhethekile, nokuhlolwa umhloli kungaba ngokushesha nangokunembile sihlaziye nesikhathi a namazinga noboya umkhiqizo eyamukelwayo kophawu. Endaweni khona chips ivumela ukwenza inezimpabano okusheshayo komngcele, njengoba isithwebuli lifunda chip imikhiqizo eziningana ukuthi tihlelwe ngendlela nokuhanjiswa indawo eyodwa.
nomkhiqizi ngamunye ungakhetha uhlobo wokugubha esetshenziswa chip kanye indlela lokukhuphula umkhiqizo. Chip ithungwe phakathi kwaso, maqondana lekuhlanganeni imikhiqizo umugqa, banamathele ulwelwesi, noma elengiswa isiphanyeko noma iluphu. Chip kuhlanganisa yakhe ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa. Ukunikeza umkhiqizo wokugubha chip akuvunyelwe. Futhi, ungavumeli ukuthengiswa kwemikhiqizo noboya nge chips ezilimele noma belingafundeki.
Marks ziyahlukahluka ngombala design. Green esetshenziswa imikhiqizo ilebula ekhiqizwa eRussia. Red isethwe imikhiqizo noboya ukwakhiwa angaphandle.
Badging igama leqembu mkhiqizo esibekiwe, lapho lesi sihloko posted zamadijithi double ukuqokwa yezinombolo ezweni womshini imikhiqizo noboya kanye inombolo kamazisi chip. amalebula oluhleliwe e Perm ukuphrinta endaweni yokukhanda.
Inqubo ukubhalisa "Ukumaka"
Kulawula umkhiqizo uhlelo kophawu noboya FTS, ukubhaliswa kwenziwa endaweni efanayo.
Ukuze uqale, nomkhiqizi ngamunye kufanele bathole isignesha evikelekile electronic.
Bese ukufaka isofthiwe kanye login portal "Ukumaka" ngokusebenzisa indawo FNS.
Ngaphezu kwalokho, umenzi uchaza imikhiqizo yayo ibe sesigabeni olukhethekile Federal Tax Service isayithi. umkhiqizo kophawu uhlelo noboya ngempela esetshenziswa amafemu esikhiqiza kusukela 2016.
Ngemva kwalokho, umenzi engena isivumelwano nomkhiqizi amalebula futhi wenze i-oda lemali oluhambisana ncamashi nesibalo imisebenzi imikhiqizo noboya.
"1c: System umkhiqizo kophawu fur"
Igawula kungaba kwenziwe ngumkhiqizi imikhiqizo noboya ekukhiqizeni yayo ngokwethula ukucushwa kwe-hlelo ezimali "1c:. Ohlelweni yokuhlukanisa imikhiqizo eyenziwe uboya yemvelo" Kanjalo, isimiso ozikhethela "1c :. Ukuphatha ifemu encane" ekhadini lento ekhasini "Ukumakwa imikhiqizo" zaba inqubo igawula, yilapho kungena khona idatha lingatholakala ukulandwa ngesimo umbiko eningiliziwe website FNS.
Ukucushwa kwe-hlelo ezimali uyakucabangela chips, esevele ahlome imikhiqizo lonke ishede yenkampani. Lapha, ngokusebenzisa ithebhu elifanele kungaba kwenziwe kabusha iyala amalebula wokugubha phezu ukuphrinta imboni yabo.
abakhiqizi ezinkulu uboya uthanda ukuthenga isofthiwe ukusetshenziswa ayo, kuyilapho abanye Uqasha hlelo.
Ukulawula inqubo yokuhlukanisa
imithetho Labelling ukukhathazeka ngokuphelele yonke imikhiqizo noboya, okuyinto afakiwe ohlwini. Ukuhambisana iyahlolwa by abahloli, ngubani abamele iziphathimandla zentela. Isisebenzi sikahulumeni kufanele usebenzise isithwebuli ekhethekile, ngawo umkhiqizo ifundwa chip. Ngokuba non-ukuhambisana izindinganiso wokugubha ilebula esihle nalokuvalelwa hhayi kuphela ngokuthi umenzi, kodwa futhi nomthengisi umkhiqizo kanye nomkhiqizo uqobo kuhoxiswe kusukela ukudayiswa. Iziphathimandla Customs anemisila scanner ukufunda amalebuli ukuvimbela ukungena ezweni izimpahla okungagunyaziwe izinga ingafaneleki.
Indlela abantu abasabela ngayo ukwethulwa amalebula wokugubha
umkhiqizo kophawu uhlelo noboya impendulo akuhileli ezihlukahlukene. Abanye abantu bacabanga ukuthi indlela intengo fur imba eqolo. Kodwa lesi sitatimende akusho pose yisiphi isizathu umgomo, ngoba intengo chip kuyinto ruble 16 kuya 22, futhi intengo noboya amajazi kusukela noboya zemvelo izindleko chip awukwazi kuthinte. Abanye abakhiqizi azibonayo wena ingozi abanye ekufezeni igawula. Kodwa umshayeli akazange ayembule nokwanda okuphawulekayo izindleko kanye nokwehla elibukhali ukufunwa noboya amajazi. Kunalokho, ijazi manje esinelebuli ngokusemthethweni ayobethemba ngaphezulu umsebenzisi sekupheleni.
Ochwepheshe of Russian Fur Union uphawula ukuthi imikhiqizo engalungile kuzonyamalala emakethe, okubhekisele ingxenye kwezomnotho. Ngakho, izindleko okulahlwayo eliphansi amajazi kanye ukuthatha imikhiqizo yabo esikhundleni izinga esifanele, akukwazi ezishibhile. Ngakho, asele emakethe imikhiqizo eliphezulu abakhiqizi uzoqala umncintiswano enempilo nomunye, futhi kancane kancane amajazi intengo kungenzeka kancane encishisiwe.
Inkampani "Henderson": zabesilisa zokugqoka, izicathulo, izesekeli
Beka ubhodisi yakho, balconette - futhi uyakumahlula njengoba Angelica!
Stoves: izinhlobo, ukufakwa, ukugcinwa. Sezitofu ukunikeza esivuthayo eside